निराशाजनक ६ महिना : निकासी १०.८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात ६४.३ प्रतिशतले वृद्धि
२०७३ माघ २७ बिहिबार, काठमाडौं । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार आ.व. २०७३÷७४ को प्रथम छ महिनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ सय २.३७ अर्व रुपैयाँ पुगेको छ । कुल व्यापारमा निकासी तथा पैठारीको योगदान क्रमशः ७.२ प्रतिशत र ९२.८ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपालको कुल निकासी १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई आई रु ३६.३२ अर्व तथा कुल पैठारीमा ६४.३ प्रतिशतले वृद्ध ... बाँकी अंश»
अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग जानकारी मागे
२०७३ माघ २७ बिहिबार, काठमाण्डौ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका वारेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुसँग छलफल गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री महराले विहान करिव डेढ घण्टा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र राजश्व सचिव राजन खनालसँग मन्त्रालयमै छलफल गरेका हुन् । छलफलमा गभर्नर र सचिवद्धयले मुलुकको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाको वास्तविकताका बारेमा उपप्रधानमन्त्री महरालाइ ब्रिफिङ्ग ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २७ बिहिबार, दमौली । तनहुँको आँबुखैरेनी नगरपालिका–६ स्थित ६९ मेगावाट क्षमताको मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाबाट ३६ मेगावाट मात्रै विद्युत् विद्युत् उत्पादन भएको छ । नदीमा पानीको बहाव कम हुँदै गएपछि सो विद्युत् गृहबाट ३३ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भएको हो । विद्युत् गृहका प्रमुख रामकुमार यादवले अहिले ३६ मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन भइरहेको बताए । नदीमा पानीको मात्रा घटेपछि उत्पादनमा कमी आएको हो “चैत मसान्तदेखि वैशाख महिनाभर भने चर्को घामले हिउ ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २६ बुधबार, बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकमा चार हजार १३३ परिवारले सरकारले उपलब्ध गराउने आवास पुनःनिर्माण अनुदान नपाउने भएका छन् । साविकको घर बस्नयोग्य भएको र अन्य ठाउँमा पनि सुरक्षित बासस्थान भएकाले उनीहरुले आवास पुनःनिर्माण अनुदान नपाउने भएको जिल्ला विकास समितिका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले जानकारी दिए । यो पहिलो चरणमा आएको तथ्याङ्क हो अन्य पनि क्रमशः आउँछन् उनले भने । विसं २०७२ मा गएको भूकम्पका कारण घर क्षति भएको र पुनःनिर्माण प्रा ... बाँकी अंश»
३६ औं राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलन हुँदै
२०७३ माघ २५ मंगलबार, काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघको ३६ औं राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलन तथा वार्षिक साधारणसभा यही माघ २८ गते शुक्रबार हुने भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् नेपाल राष्ट्र बैकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसै सत्रमा प्रा.डा. सतिशकुमार ओझाबाट मुलुकको राजनीति ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २५ मंगलबार, काठमाडौं। एनसेलका ग्राहकहरुले आफुले छानेको एउटा विषेश नम्बरमा अब अझ सुलभ दरमा कुरा गर्न सक्नेछन् र रिङ ब्याक टोनमा पनि ५०% छुटको मजा पनि लिन सक्नेछन्। यही बुधबार (माघ २६) देखि लागु हुने गरी देशको अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले भ्यालेनटाइन अर्थात प्रणय दिवशको अवसारमा दुई आकर्षक योजनाहरु सार्वजनिक गरेको छ। एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले एउटा एनसेल नम्बरलाई आफ्नो नम्बरसँग पेयर गरी आफ्नो प्रियजनसँग अझ सुलभ दरमा क ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २५ मंगलबार, सिन्धुली। पुर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले एक सार्वजनिक समारोहमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने र नेपाल र नेपालीहरुलाई उज्यालो दिने बताइरहदा धेरै मानिसहरु हावाबाट विजुलीको सन्दर्भमा सकारात्मक र नकारात्मक टिका टिप्पणीहरु भएका थिए । धेरैले प्रधानमन्त्रीको हावाबाट विजुली निकाल्ने कुरालाई हावामै उडाएका थिए । हावाबाट विजुली निकाल्ने कुरा सिन्धुलीबासीले भने अब अचम्म मान्नु पर्ने छैन किनकी हावाबाटै निस्कीएको विजुली जिल्लाबासीहरुले प्रयोग ... बाँकी अंश»
माथिल्लो खोरुङ्गा आयोजनामा बैंकहरुले गरे लगानी
२०७३ माघ २५ मंगलबार, काठमाडौँ । तेह्रथुम पावर कम्पनीले ७.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो खोरुङ्गा खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजनामा माछापुच्छ्रे« बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा नेपाल बङ्गलादेश बैंक र जनता बैंकले लगानी गर्नेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतामा कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक मोहनकुमार डाँगी र बैंकका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कुल १ अर्ब ३७ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा रु ३७ करोड प्रवद ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २५ मंगलबार, रसुवा। कादूरी नामक गैर सरकारी संस्थाको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा हिमनदीको पानीलाई सदुपयोग गर्दै क्याङजेन नजिक एक सय किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । भूकम्पले प्रभावित तुल्याएको लाङटाङ क्षेत्रमा अहिले आवास तथा होटल पुनःनिर्माण एवम् सुदृढीकरण गर्ने कार्य प्रायः सम्पन्न भइसकेको छ । पर्यटक आउने वातावरण सिर्जना भइसकेको र अब निर्माण हुने विद्युत् आयोजनाले सबै क्षेत्रमा सहज हुने विद्युत् निर्माण उपभोक्ता समितिका ... बाँकी अंश»
पाँच किलो चरेससहित एक भारतीय नागरिक नियन्त्रणमा
२०७३ माघ २५ मंगलबार, वीरगन्ज । सशस्त्र प्रहरी बल भन्सार सुरक्षा गुल्म वीरगन्जले मंगलबार बिहान ८ः३० बजेतिर पाँच किलो चरेससहित एक भारतीयलाई पक्राउ गरेको छ । काठमाडौंबाट आफ्नो घर भारत, कोलकातातर्फ गइरहेका सेख सदामलाई भन्सार सुरक्षा प्रहरीले जाँचका क्रममा झोलामा लुकाइछिपाइ लगिरहेको अवस्थामा चरेस फेला परेको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्ष सुशील सुवेदीले बताए । अभियुक्त सदामले काठमाडौंका एक जना व्यक्तिले सो चरेस भनेको ठाउँमा पु¥याएबापत भारु १० हजार दिन्छु भने ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २४ सोमबार, काठमाडौं । पोहोर आर्थिक वृद्धिर शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा खुम्चिएकामा यस वर्ष बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यद्यपि, हालसम्म १२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत अर्थात् विकास खर्च भएको छ । अर्थतन्त्र सहज छैन । यस वर्षको बजेट समेत अब अध्यादेशबाट ल्याउने सरकारको तयारी छ । पर्याप्त समय हुँदा हुँदै राजनीतिक झगडाकै कारण सदनमा छलफल गराएर बजेट ल्याउन सरकार असफल भएको छ । यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा कहीँ न कहीँ पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यस्तै, संसदका सम्बन्धित अर्थ, विकास ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २४ सोमबार, लमजुङ । सार्क राष्ट्रमै नमुना मानिएको घलेगाउँमा आउने पर्यटकले अब आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने भएको छ । घलेगाउँ पर्यटन विकास समितिले गाउँमा आउने पर्यटकका लागि १२ बुँदे आचारसंहिता बनाएको हो । सो आचारसंहितामा गाउँमा आउने सबै पर्यटकले पहिले स्थानीय समितिमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । नाम दर्ता गराएसँगै समितिले पाहुनाको स्वागतसहित व्यवस्थापन गर्छ । पर्यटकले स्थानीय उत्पादन बाहेक गाउँमा उपलब्ध नहुने कुनैपनि कुरा माग गर्न पाउँदैनन् । स्थानीयवा ... बाँकी अंश»
नेपाल वायुसेवाले अब बोइङ नउडाउने, दुईटा बोइङ हटाउने
२०७३ माघ २४ सोमबार, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्ना दुई वटा बोइङ लिलाम गर्ने भएको छ । निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘नेपाल वायुसेवाका दुई बोइङ लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।’ दुई वटा बोइङमध्ये सुरुमा निगमसँग अहिले रहेको बोइङ– सेभेन फिफ्टीसेभेन (७५७) एक हप्ताभित्रै लिलाम प्रक्रियामा जानेछ । ३० वर्ष बढी समय चलेका बोइङलाई निगमले हटाउन लागेको महाप्रबन्धक कंशाकारले बताए । अब वायुसेवा निगमले वाइडबडीबाट मात्रै सेवा दि ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २४ सोमबार, काठमाडाै‌ । उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले अहिलेको समय औद्योगिकरणको समय भएकाले नेपाली उद्योगहरुको उत्पादन उपयोग गरेर औद्योगिकरणमा सघाउन नेपाल सरकारका सहसचिवहरुलाई आग्रह गरेका छन् । उद्योग मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोगको अवस्था सम्वन्धि छलफल कार्यक्रममा मन्त्री जोशीले नेपालमा लगानीको सुरक्षा छ र नेपालमा स्वच्छ व्यवसाय गरेर सरकारलाई कर तिरेर फाईदा लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न ... बाँकी अंश»
२०७३ माघ २४ सोमबार, धनगढी । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले ‘युके एड सक्षम एक्सेस टू फाइनान्स’ सँगको सहकार्यमा कैलाली जिल्लाको चार स्थानबाट शाखारहित बैंकिङ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । जिल्लाको चौमाला, पहलमानपुर र मसुरिया गाविसका चार स्थानबाट शाखारहित बैंकिङ सेवा शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढीका निर्देशक विश्रुत थापा र युके एड सक्षम एक्सिस टू फाइनान्सका प्रशन्न केसीले संयुक्त रुपमा बैंकिङ सेवाको उद्घाटन गरे । ... बाँकी अंश»
विद्युतमा भएको करोडाैं घोटालाको छानविन माग
२०७३ माघ २३ आइतबार, बझाङ । साना जल विद्युत् आयोजनाको मर्मतका लागि जाईकाबाट भएको करोडौं खर्चको छानविन गर्न माग राख्दै बझाङका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । दुई सय किलोवाट् क्षमताको पावर हाउस मर्मतका लागि जाईका नामको संस्थाले ८५ करोड खर्च गरे पनि विद्युतको समस्या सुधार नभएको भन्दै स्थानीले छानविन गर्न माग गरेका हुन् । सदरमुकाम चैनपुरका व्यापारी र स्थानीयले आइतबार विद्युत मर्मतका नाममा भएको करोडौं खर्चको छानविन गर, जनतालाई विद्युतको समस्याबाट मुक्त गर, जाईका र विद्युत ... बाँकी अंश»
भगिनी शहरमा महानगरपालिकाले नेपाली वस्तुहरुको विक्री प्रवर्द्धन गर्ने
२०७३ माघ २३ आइतबार, काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच महानगरपालिकाको भगिनी सम्वन्ध स्थापना भएका विभिन्न मूलुक (अमेरिका, जापान, चीन, भारत, याङ्गुन, म्यान्मार, कोरिया) लगाएत देशका १६ वटा शहरहरुमा नेपाली वस्तुहरुको विक्री प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहित गर्ने उद्धेश्यले छुट्टै प्रदर्शनी तथा विक्री कक्ष संचालन गर्ने बिषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । उद्योग मन्त्रालयको सभाहलमा आज आयोजित कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज ज ... बाँकी अंश»
लाटोकासेरो संग्राहालय बन्यो आकर्षणको केन्द्र
२०७३ माघ २३ आइतबार, कपिलवस्तु । कपिलवस्तुको जदशीपुरमा गरिएको २ दिने लाटोकोसेरो उत्सवकोक्रममा निर्माण गरिएको अस्थायी संग्रहालय उत्सवको आकषर्णको केन्द्र बन्यो । लाटोकोसेरो र हुचीलका बिषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले खडा गरिएको संग्रहालयमा दर्शकहरुको ओईरो लागेको थियो । उत्सवको अवलोकन गर्न शनिवार आएकी अनन्ता न्यौपानलेले उत्सवमा आफुले लाटोकसोरे बारे सबै जानकारी मिलेको बताईन । बिशेष गरी लाटोकोसेरो संबन्धी बनाईएको संग्रहालयबाट आफुलाई त्यस बारे धेरै जानकरी मि ... बाँकी अंश»
ठाउँ–ठाउँमा पुल, गाउँ–गाउँका सडक जोडिए राजमार्गसँग
२०७३ माघ २३ आइतबार, मोरङ । लामो समयदेखि पुल बन्न नसकेका दश वटा ठूल–ठूला खोलामा पक्की पुल निर्माण भएका छन् । जिल्ला विकास समिति मोरङले एकै पटक २८ वटा पुल निर्माणको काम अघि बढाएकामा दश वटा पुल निर्माणको काम सकिएको छ । जिल्ला विकास समितिको आन्तरिक श्रोत तथा स्थानीय पुल कार्यक्रम अन्र्तगत करिब १६ करोड रुपैँयाको लागतमा दश वटा पुल निर्माणको काम सम्पन्न गरेको हो । जसअनुसार सिगिया, घागी, कटनु, खदरा यसैगरी चिसांग, लोहन्द्रा, मोरंगी, तथा हुरहुरे खोलामा पुल निर्माण भ ... बाँकी अंश»
महोत्सवमा भलिवल युवाहरुको रोजाई
२०७३ माघ २३ आइतबार, स्याङ्जा। स्याङ्जाको वालिङमा आयोजना गरिएको छैटौ वालिङ महोत्सवमा भलिवल खेल प्रतियोगिता युवाहरुको आकर्षणको केन्द्र बन्न पुग्यो । महोत्सवले युवाहरुलाई पनि समेट्नु पर्छ भन्ने उदेश्यका साथ संचालन गरिएको अन्तर गाविस तथा नगरपालिका स्तरीय भलिवल प्रतियोगिताले युवाहरुको मन तान्न सफल भएको आयोजकले बताएका छन् । स्याङ्जाका १६ गाविस र ३ नगरपालिका तथा तनहुँ जिल्लाबाट एक टिम गरी २० टिमको भलिवल प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए । पछिल्लो समय ग्रामिण क्षे ... बाँकी अंश»